Plastic extruder Suppliers na orylọ ọrụ - China Plastic extruder Manufacturers
SPC na-emepụta ahịhịa na-echekwa gburugburu ebe obibi nke PVC nke ihe si na extruder, ihe nkiri PVC agba + PVC mkpuchi na-eguzogide akwa + PVC ala ihe a na-agbanye ma tinye n'otu oge site na calender anọ. Ngwaahịa a dị mfe na usoro, jiri ya na-ekpo ọkụ na enweghị gluu.
Akụkụ nke ngwa: Ogige Ubi ahụ, Ebe Ntụrụndụ Ebe Iche rangechọ Mma na ebe izu ike nke veranda Pavilion; ụlọ azụmahịa na-achọ mma na mpụga, mgbidi ụlọ nke oge a na-ekpuchi mgbidi; A na-ebugharị ihe eji ekpuchi ikuku, ikuku moto, ụgbọ elu, ụgbọ oloko, ụgbọ mmiri, ụgbọ ala, ụgbọala, ụgbọ agha okpuru na ọta ndị agha na ndị uwe ojii; Ulo ekwentị, Mgbasa Ozi Adzọ Mgbasa Ozi, igbe igbe ọkụ na-egosipụta ngosi ngosi ngosi ngosi ngosi ngosi; Ihe mgbochi mkpọtụ na n'okporo ụzọ awara awara na viaducts.
Pee Pp Osisi-Plastic Ft Extrusion, Pc Mpempe akwụkwọ, Vkwanyere Multi Layer Okpomọkụ mkpuchi Corrugated Board, N'èzí Ngwa, Pc oghere mpempe akwụkwọ, Vkwanyere Corrugated Board,